DAAWO:Ilmo Yar oo La Arkay Isagoo Neefsanaya Kadib Markii Ay Dhakhaatiirtu Hubiyeen Dhimashadiisa Saddex Jeer | Baahin Media
DAAWO:Ilmo Yar oo La Arkay Isagoo Neefsanaya Kadib Markii Ay Dhakhaatiirtu Hubiyeen Dhimashadiisa Saddex Jeer
Nin iyo xaaskiisa ayaa ogaaday in wiilkooda yar ee saddexda jeer ay dhakhaatiirtu ku dhawaaqeen dhimashadiisa uu weli ka dhex neefsanayo kanfanta dhexdeeda.
Sida ay sheegtay jariidada The Sun, dadka oo dhan waxey aamineen in canuga yar ee Dhilan Daren uu u geeriyooday xilligii uu dhalanayay kadib 27 isbuuc oo uurka lagu siday.
Maamulaha isbitaalka magaalada Santa Cruz ee Bolivia-da bari oo la yiraahdo Federico Urquizo, ayaa sheegay in sida ay wax u dhaceen ay ahaayeen mid mucjiso ah, halka boolisku ay aaminsan yihiin in wixii dhacay ay sabab u a hayaan dayacaad dhanka dhakhaatiirta ah.
Maamulaha isbitaalka ayaa sheegay in ilmahan yar uu dhashay iyadoo aaney ka muuqan wax calaamad ah oo muujineysa inuu nool yahay, sidaa darteed; saacad ka dib dhakhaatiirtu mar kale ayey baareen sidii hore ayuu ahaa oo wax nolol ah lagama dareemin, waxey baaritaan ku sameeyay labo saacadood ka dib oo canugii yaraa la baaray si loo hubiyo inuu nool yahay iyo in kale, laakiin wax nolol ah waa laga waayay.
Waalidiinta dhalay ilmahan yar ayaa waxaa loo daabacay shahaadaha dhimashadiisa si ay ugu diyaar garoobaan iney aastaan, kadib inta aan si mucjiso leh loo arkin isagoo kafantii ka dhex neefsanaya oo nool.